ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄)	26
ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄)
Posted by စာ ကြမ်းပိုး on Dec 2, 2014 in Arts & Humanities, Entertainment, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 26 comments
အရသာ စာပေလေးနဲ့ စလိုက်ရအောင်..!!
အောင်မိုးသူရဲ့ ရသစာ သမားကနေ ရသာ စာပေပိုင်းကို ကူးတော့မလား ထင်မှတ်မှားရတဲ့ ပို့(စ) တွေပါ။
ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်စွာချက်ပြုတ်နိုင်တာမို့ ချက်ရေးပြုတ်ရေး သွေးအေးနေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အကျိုးရှိနိုင်တာမို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
စိတ်အဆာသွတ်ပေါင်း – ကြွေလွင့်ပန်း
ကြွေလွင့်ပန်း ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အခြေခံ ရသ စာတစ်ပုဒ်ပါ။
ဖတ်ပြီး နည်းနည်း မွန်းကြပ်လာသလို ခံစားရတာကလွဲရင် ခံစားချက် အပြည့်ပါတဲ့ စာစုမို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
စိတ်ကိုပြင်ချင် ရိပ်သာဝင် အပိုင်း(၁) မှ (၅) – aye.kk
အေးကေကေ ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဓမ္မ အမြင်ကို အပိုင်းခွဲပြီး ရေးထားတဲ့ အဖိုးတန်ပို့(စ) လေးတွေပါ။
ဖတ်ပြီး တရားဓမ္မ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက် နီးကပ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားမိသွားနိုင်တဲ့ ပို့(စ) တွေပါ။
“ ပျော်ရွှင်ဆင်နွဲ ရွာအလှူပွဲ” – ကိုပေါက်(မန္တလေး)
အလှူပွဲကပြန်ခဲ့တယ် – ကိုပေါက်(မန္တလေး)
တဆက်တည်း ဖတ်ရမဲ့ ပို့(စ) ၂ ပုဒ်ပါ။
မြန်မာ ဆန်သော ကျေးလက်ဆန်သော အလှူတစ်ခုကို အရေးအသားရော ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ပြသသွားတာမို့ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
စကားလုံးပြတိုက်-အမှတ်(၁) – အလင်းဆက်@မောင်သူရ
အလင်းဆက်ရဲ့ မအားတဲ့ကြားက သူမြတ်နိုးရာ ကဗျာ အပိုင်းအတွက် အားထုတ်ထားတဲ့ ကဗျာပို့(စ) အညွှန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာချစ်သူတွေ လက်လွတ်မစိုးလို့ စာကြမ်းပိုးတို့က ပြန်လည် ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။
ဗစပ်ကဖျားဖျား လက်ကဓါးဓါး Militant – ဦးကြောင်ကြီး
ခု လပိုင်းတွေမှာ ဦးကြောင်ကြီးရဲ့ အမြင်တွေကို အကြိုက်တွေ့နေမိတာမို့ ညွန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ROMANTIC TATTOO – လရိပ်
ရွာသူ အသစ်လေး လရိပ်ရဲ့ ညက်ညောတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားတဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်ပါ။
စစချင်း ပို့(စ) မှာကို အားပေးမှုတွေ အများကြီးရတဲ့ လူသစ်တစ်ယောက်ပါပဲ။
လို၏…….မလို၏…. – hmee
ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် ရင်ထဲရောက်အောင် ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့မှုပါ။
အမျိုးကောင်း သမီး ဆိုတာကို ဘယ်လို ယူဆသလဲလို့ မေးရင် ဖတ်ဖို့ ညွှန်းရမဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်အဖြစ် စာကြမ်းပိုးတို့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ရွက်ပုန်းသီးများ – မစုဥာဏ် http://mandalaygazette.com/207577
လကုန်ခါနီးမှ ဖတ်ရတဲ့ ပို့(စ) ပါ။
စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံကို ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ နားလည်မှု တွေနဲ့ ဖြည့်စွတ်ရေးသားထားတာမို့ စာကြမ်းပိုးတို့ ဒီ လ အကြိုက်တွေ့တဲ့ ပို့(စ) ပါ။
လက်ခံရခက်ခဲသော………… – Mr. MarGa
မစ်စတာ မာဃ ၃ ယောက်ပေါင်း ရေးထားတဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်ပါ။
မတူညီတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာမို့ ဖတ်ပျော်တဲ့ စာတပုဒ်ပါ။ ရှယ်သူလည်း များပါတယ်။
အားကျမိတဲ့ အမေရိကန်တယောက်- padonmar
ခေါင်းလေး တမော့မော့ – weiwei
လွမ်းရုံလေးနဲ့ နွမ်းမယ်ထင်ပါရဲ့….- Shwe Ei
အပျင်းပြေ ထိုင်ကစား – ခင်ဇော်
ချစ်သဲကြိုး – Nay Satkyar Naing
ကြမ်းပိုးများနှင့် အိမ် – တောင်ပေါ်သား
View all posts by စာ ကြမ်းပိုး →	Blog
ခင်ဇော် says: ၁၄ ပုဒ် ဆိုတော့ မဆိုးဘူး ပြောရမားး
ရွေးစာ နည်းတယ် ပြောရမား မသိ။
အောင် မိုးသူ says: ဟင်းချက်လည်း ၀ါသနာပါလို့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: တညား ထမင်းဆိုင်မှာ တစ်ပတ်လောက် မချက်ချင်ဘူးလားငင်??
Mr. MarGa says: မားကတ်တင်း များ
ခင်ဇော် says: ဒါတောင် မာကက်တာကို စပွန်ဆာမပေးရသေးဝူးးး
Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: ချက်ပေးချင်ပါတယ် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် မမဂျီး
ခင်ဇော် says: အာ့ဆို တပတ်စာ
ချက်နည်းလေးရော နဲ့ ရေးပေးနော်။
kai says: ဒီဇင်ဘာတော့ရောက်ပြီ…
နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးရက်တွေက.. ယူအက်စ်မှာ.. ကျေးဇူးတော်များနေ့နဲ့ဆက်ပြီး.. ပိတ်ရက်ရှည်ရကြတာမှာ.. ဓာတ်ဆီဈေး.. တဂါလံ.. ၃ဒေါ်လာအောက်ကျသမို့.. ခရီးရှည်ထွက်ကြနဲ့.. အိမ်မကပ်ကြ…။
ဒါပေမယ့်.. ပို့စ်ကောင်းတွေမြင်ရတယ်.. ထင်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: မျှော်နေတုန်း ရောက်လာတဲ့ပို့စ်မို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ …
ကလေးတွေလိုမျိုး စာမေးပွဲဖြေခါနီး စပေါ့တောင်းသလိုဖြစ်နေပြီ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တိန် တိန် နှစ်ခါတိန်
ကဗျာပြတိုက်ဘက် စိတ်နှစ် ကိုယ်နစ်နေလို့ အဲ့ဒီဘက် မေ့သွားတယ်ဗျာ
ခင် ခ says: ပိုစ့်ကောင်းလေးတွေမြူး
မြစပဲရိုး says: အချိန်မှန် ရထားလေး ဆိုက်ပါပေါ့။
လ တွေ ကုန်လာတာ တနည်း အချိန် တွေ ပြောင်း လာတာ ကို ထင်ထင် ရှားရှား မြင်စေတဲ့ လဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပြောရရင် ဒီလ ထဲ တွေ တော်တော်ကောင်းတာ လဲ သတိထားမိတယ်။
ဇွဲရှိရှိ နဲ့ ချီတက် နေတာ ကို လေးစာချီးကျူးးပါတယ် ကြမ်းပိုးများ။ POst အသစ် လေး တွေ တွေ့ ပေမဲ့ နောက်မှ ပြန်လာ ဖတ် ပါရစေ။
မနေ့က ညနေစာ ဟင်းမချက် ဖြစ်လို့။ ဒီနေ့တော့ ချက်မှ။
မဟုတ် ရင် အိမ်ပေါ်က ကန်ချခံရ မလား မသိ။
kyeemite says: .ကြိုးစားပီးတင်ပေးတာဗရာဗိုပါဗျာ…
.ဒီလ ရွေးဖို့ နဲနဲခက်နေတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: ​တော်​​သေးရဲ့….
kyeemite says: .အားကျမိတဲ့ အမေရိကန်တယောက်- padonmar
.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စက်ဝိုင်းများ (၂)- မြစပဲရိုး
.အဲ့နှစ်ပုဒ်လည်းသဘောကျစရာ စာကြမ်းပိုးရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အရီး ပို့(စ) က ပြီးတဲ့ထိစောင့်နေတာထင်ပါရဲ့။
အာတီဒုံ ပို့(စ) ကတော့ ကြမ်းပိုးတွေ ဗိုက်ဆာနေတုန်း ရေးလို့ မျက်စိသျှမ်းသွားတာများလားးး
kyeemite says: .၀ုတ်နိုင်ဘာဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: http://mandalaygazette.com/206715
အသဲ ကွဲပါစေ – ဘီ(လ်) နှင့် မီလင်ဒါ ဂိတ်(စ်) တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စတင်းဖို့(ဒ်) တက္က္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း မိန့်ခွန်း
Posted by မြစပဲရိုး on Nov 3, 2014 in Editor’s Choice,
ဒါလေးကို အမေရိကားနဲ့ အမေရိကန် ငြင်းရင်းမေ့သွားကြလေရော့သလားကွယ်ရို့။
မြစပဲရိုး says: ချစ်အစ်မဒုံ – အကြံပြု ပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်။
ကျွန်မသာ စာကြမ်းပိုး ဖြစ်ခဲ့ရင်လေ
“အန်တီဒုံ ခင်ဗျား – ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသား နဲ့ ယုံကြည်ရာ ကို ရွေး ထားခဲ့ ကြ တဲ့ စာများ မို့
ဒီနေရာမှာ တော့ ဦးဏှောက် ကို နေရာ မပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား၊
ဒီ အတိုင်း နှလုံးသား အလို အရ ဘဲ နေဗျစီ” လို့။
ဦးကြောင်ကြီး says: အညံ့ဇုံးပို့စ်များဆိုပြီး ထွံအုမ်းမှ..။ ငါ့ကို ဗလော့ထားသူ မကောင်းပြောသူ အကုန် တမ်းစီ ထည့်ပစ်မဲ… ဟွင်း ဟွင်း…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အခုတလော … ဒီ ဦးကြောင်… စိတ်ကြမ်းတွေ ဝင်နေတယ်… ။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟင့်.. ချိတ်ချိုးတယ်… တဂျီးကလဲ မထောက်ပံ့… ကြမ်းပိုးအဖွဲ့ကလဲ ရေးပါ အားပေးပြီး လာလဲ မမန့်ဘူး… တော်ပြီ နောက်လ စားညွှန်း လုပ်တော့ဘူး… ပိုက်ပိုက်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်… :P
နောက်နေတာနော်… အကုန်ကောင်းပါတယ် ပို့စ်တွေက ဗရာကြော်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကြမ်းပိုးတွေက မမန့်ဘူးလေကွီ။
Yae Myae Tha Ninn says: တိတားပဲ.. လာပြီး ဖော်ကောင်လုပ်နေတယ်… ဟွင်း… (ဦးမျိုးကဗျာထဲက နှုတ်ခမ်းနဲ့) :P
တောင်ပေါ်သား says: ဘယ့်နှယ် ဒီနှုတ်ခမ်းလေးကိုပဲ လာ လာ ခလုတ်တိုက်နေတာတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟားဟား.. မတွေ့ဖြစ် မမန့်ဖြစ် မစ ဖြစ်တာ ကြာလို့ပါ.. ဦးမျိုးရယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.